Kukadzi 20, 2011 na8: 04 PM
Ndiri mutsva akanaka pachiitiko chekublogi (http://jasonjhr.wordpress.com/) uye ndave nedambudziko rekuuya ne blog post mazano. Uku kunyengera kukuru kubatsira kutarisa mamwe mazano, uye pamwe uwane mamwe matsva.
Iwe unofunga kuita izvi kunobatsira neSEO uye neshoko rezwi sarudzo zvakare?
Ndingafunge kudaro, sezvo urikugadzirisa mablog blog ako nekutsvagisa kwakakurumbira muGoogle. SEO inosanganisira yakawanda inofamba zvikamu, kunyange 🙂
Imwe Degree Kushambadzira
Zvakawanda kuverenga. Zvakakosha kumakambani kuti arambe achipomba zvinyorwa zvitsva kunze uye vachiuya nemafungidziro matsva emawonero nguva nenguva zvinogona kunge zvichinetsa. Izvo zvakakosha kugara pasi uye kuronga kumberi, kutora nguva kunze uye tarisa pane yako yemukati zano. Kubva paGoogle chinzvimbo kusvika kubatanidza chivakwa, zvakakodzera nguva nenguva nesimba!
Mazano akajeka, ini ndinosarudza kutora mazano kubva pane zvezuva nezuva zviitiko kuitira kuti ndipe iyo iri padyo fomu yekuverenga kwevaverengi.